Ibnu Kathiir | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Abtirkiisa iyo meesha kuu dhashay.
Cimaadu diin abul Fiddaa Ismaaciil Ibnu Cumar Ibnu Kathiir Al Qurashi Ad-dimishiqi Ash-shaafici. Waxuu ahaa imaamku xaafid , taariikhyahan iyo mufassirba.
Wuxuu ku dhashay Magaalo yar oo loo yaqaano Mijdal oo ah tuulooyinka Basra, waana tuulada ay hooyadii kasoo jeeday, wuxuuna dhashay sanadkii 700H ama wax yar kadib.
Wuxuu ku koray oo ku barbaaray Imaamku xaafad diineed oo ah guri cilmi iyo cibaado leh. Aabihii Cumar Ibnu xafs wuxuu arday u ahaa waxna ka bartay Imaamu Nawawi iyo Fazaari ,wuxuuna ka ahaa khadiib ka khudbeeya Tuulada ay daganaayeen. Ibnu kathiir aabihii waxuu geeriyooday markii uu ibnu kathiir jiray 3 sano oo kaliya. Kadib geerida aabihii reerku waxay usoo guureen dhankaas iyo magaalada Dimishiq sanadku markuu ahaa 707H. Aabihii wuxuu kala dar daarmay walaalkiis ka waynaa oo la odhan jiray Cabdul-Wahaab, aad buuna uga dadaalay inuu reerka Sifiican u biilo una hagaajiyo, ibnu kathiirna aad buu u amaanay una sheegay inuu abaal badan u galay.
Ibnu kathiir Allaha ha u naxariistee wuxuu bilaabay culuumta barashadeeda isagoo aad u yar. Qur’aanka waxuu xafiday sanadku markuu ahaa 711H, sdoo kale wuxuu xifidayay kitaabka Fiqhi-ga shaaficiyada ee layidhaa “Tanbiih”. Wuxuuna xafiday ama uu daalacay kutub aad u badan.
Kadib wuxuu la xididay imaamkiiii xaafidka ahaa ee loo yaqaanay Abil Xajjaaj al-Mizyi. Oo wuxuu guursaday gabadhiisa loo yaqaanay Zeinab. Muddo badan ayuu ag fadhiyay oo lana joogay, cilmi badana ka bartay.
Ibnu kathiir Culimo aad u badan ayuu la kulmay intuu noolaa kana qaatay cilmiga . Qoraalkeenan kuma soo koobi karno sababtoo ah aad bay u tiro badnaayeen . Laakiin waxaynu sheegi kuwa ugu waa weynaa uguna caansanaa:
Sheekhii Sodogiisa ee ahaa Abil Xajaaj Almizyi oo caaan ku ah cilmiga rijaasha .
Sheekhul Islaam Ibnu Taymiyah
Sheekh Bahaa’u diin Al-qaasim Ibnu Casaaakir
Shamsudiin Maxamed Ibnu Barakaat
Sheekh abu Isxaaq Ibraahim Alfazaari
Ibnu kathiir wuxuu kiciyay oo uu wax baray arday aad u fara badan dad badana way ku intifaaceen cilmigiisa Ilaahayna wuu barakeeyay. Ardaydiisa oo aad u badan kuwa ugu caansan hadaan sheegno waxaa ka mid ah:
Calaa’udiin ibnu xijji Ash-shaafici
Maxamed Ibnu Maxamed Ibnu khaddar Alqurashi
Imaam Ibnu abil Cizzi Alxanafi
Wiilkiisa Maxamed Ibnu Ismaaciil
Al-xaafid abul Maxaasin Alxusayni , iyo arday kale oo aad u fara badan.
Kutubta uu Qoray
Ibnu kathiir wuxuu ahaa imaam aad u qoraal badan, Ilaahayna uu barakeeyay oo xataa qoraalladiisa umadan uu u bareekayay. Umad badan ayaa ka faa’iidaysta kutubta kala duwan ee uu ka tagay imaamku. Dhamaan daafaha aduunka ayaa laga helaa, wadan walba oo aad tagto waad kahelaysaa ibnu kathiir kutubtiisa. Mawduucyo badan oo kala duwan buu wax ka qoray Imaam ibnu kathiir
تفسير ابن كثير ( tafsiirkiisa waxaa lagu tiriyaa tafsiirada ugu saxsan)
Ibnu kathiir culimadu aad bay u amaaneen una sheegeen inuu ahaa caalim rabbaani ah culimada amaantay ee ka hadashay waxaa kamid ah Sheekhiisa Imaamu Dahabi.
Imaamu Dahabi oo kahadlayay Ibnu kathiir baa yidhi
” إسماعيل بن عمر بن كثير : الإمام ، الفقيه ، المحدث الأوحد ، البارع ، عماد الدين البصروي الشافعي ، فقيه متقن ، ومحدث متقن ، ومفسر نقال ، وله تصانيف مفيدة ، يدري الفقه ، ويفهم العربية والأصول ، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم ، سمع مني ، وله حفظ ومعرفة ” انتهى
Imaamu ibnu kathiir allah ha u naxariistee wuxuu geeriyooday taariikhdu markii ay ahayd (26. shacbaan. 774hj). Wuxuu ku geeriyooday magaalada Dimishiq, waxaana lagu aasay xabaalo ku dhow Qabriga sheekhiisa Ibnu Taymiyah. Janaazo aad u ballaadhan ayaa loo dhigay imaamka ,oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan sida uu sheegay Ibnu Naasiru diin.
Waxaa kamid ahaa Gabayadii loogu baroor diiqay ibnu Kathiir geeridiisa gabaygan:
لفقــدك طلاب العلـوم تأسـفوا
وجـادوا بـدمع لا يبـير غزيـر ولو مزجوا ماء المـدامع بالدمـا لكـان قلـيلا فيـك يـا بن كثيـر
from → Ibnu Kathiir, Taariikhda Culimada Xadiith-ka
← Sanadka/silsilada xadiiska iyo muhiimadiisa
Al Mutawaatir →